यसकारण बढ्दै छ सुनको मूल्य, नेपालमा कसरी हुन्छ सुनको मूल्य निर्धारण ? — Imandarmedia.com
यसकारण बढ्दै छ सुनको मूल्य, नेपालमा कसरी हुन्छ सुनको मूल्य निर्धारण ?
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य उच्च हुनसक्ने आंकलन गरिएको छ । सुनको मूल्य बढ्न सक्ने तीन वटा कारण विश्वका धातु विज्ञहरुले पेश गरेका छन् ।
कमजोर अवस्थाको डलर, अमेरिका र उत्तर कोरियाबीचको सम्भावित युद्ध तथा डोनाल्ड ट्रम्पमाथिको महाअभियोगले सुनको मूल्य बढ्न सक्ने बहुमूल्य धातुका विज्ञ जिम रिकार्ड्सले बताएका छन् ।
सुनको मूल्यका लागि महत्वपूर्ण वर्ष २०१८ हुने देखिएको रिकार्डले भनेका छन् ।‘हामी मेरो जीवनकालको तेस्रो बुल बजारमा छौं, हामीले धेरै लामो यात्रा तय गर्नु छ,’ किट्को न्युजसँगको अन्तर्वार्तामा रिकार्डले बताएका छन् ।
डलरको मूल्यमा आउन सक्ने सम्भावित गिरावट, उत्तर कोरियासँग अमेरिकाको युद्ध, चीनसँगको व्यापार युद्ध र राष्ट्रपतिविरुद्धको महाअभियोग लगायत सुनको मूल्य बढ्ने कारण भएको उनले पेश गरेका छन् ।
यी घटनाले सुनको मूल्य प्रतिऔंस १० हजार डलरसम्म पु¥याउन सक्छ । गत साता सुनको मूल्य १ हजार ३ सय ७० डलर अर्थात एक वर्षभन्दा बढी अवधिकै उच्चमा पुगेपछि पछिल्ला दिनहरुमा पुनः ओरालो लाग्न थालेको छ । सोमबार यो वस्तु १ हजार ३ सय ४७ डलरमा कारोबार भएको थियो । यद्यपि यो वृद्धि वस्तुको मूल्यमा भएको वृद्धिका साथ आएको छ ।
‘सुनले तपाईंको क्रयशक्तिको रक्षा गर्छ । तर, यदि सुन ५ हजार डलर कायम भयो भने तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल ४ सय डलर हुन सक्छ र सबै वस्तुको मूल्य दोब्बर वा तेब्बर हुन सक्छ । तपाईं वास्तवमै यो अवस्थामा हुनुहुन्न,’ रिकार्डले भनेका छन् ।
गत साताको वृद्धि अमेरिकी सेक्रेटरी स्टेभेन मुचिनको वक्तव्यसँग सम्बन्धित थियो । उनले लगातार दोस्रो दिनमा पनि अमेरिकी प्रशासन व्यापारमा कमजोर डलरको पक्षमा रहेका बताएका थिए । उनको यो अभिव्यक्तिसँगै सुनको मूल्य तीन वर्षकै न्यूनमा ओर्लिएको थियो ।
नेपालमा यसरी हुन्छ सुनको मूल्य निर्धारण
बिश्व बजारमा सुनको मूल्य परिवर्तन भइरहने कारण अमेरिकी डलरको सटही दर हो । अमेरिकी डलरको विनिमय दर दिनहुँ परिवर्तन भइरहन्छ । नेपाली रुपैयाँको अमेरिकी डलरसँगको सटही दर र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रहेको सुन मूल्यको हिसाब गरिन्छ । अमेरिकी डलरसँग नेपाली रुपैयाँको विनिमय दर हिसाब गरेर निकालेको मूल्यमा सुनको भन्सार दर जोडिन्छ ।
एक प्रतिशत नाफा राखेर नेपाली बजारमा सुनको मूल्य निर्धारण हुने गरेको छ । नाफाको रुपमा राखिएको एक प्रतिशतमध्ये बैंकलाई आधा र सुन व्यवसायीलाई आधा प्रतिशत भाग लगाइन्छ । कहिलेकाहिँ माग र आपूर्ति आधारमा पनि भाउ तलमाथि पर्न सक्छ ।
२०७४ माघ २१ गते प्रकाशित